Antso fampiatoana Amazon: Zavatra tokony hatao aorian'ny fampiatoana ny fivarotana an'i Amazon
Ataovy & Aza atao aorian'ny fampiatoana ny kaonty mpivarotra Amazon
Amazon ho an'ny mpivarotra an-tserasera dia ny meka masina. Ary, mitovy ihany koa ho an'ny mpanjifa izany. Betsaka ny sokajy sy ny vokatra samy hafa izay azon'ny olona vidiana. Na dia eo aza ny fitomboan'ny isan'ny mpivarotra eo amin'ny sehatra manome vokatra lehibe dia nitombo koa ny isan'ireo fampiatoana fampiatoana Amazon.
Nitranga izany satria nihena ny kalitaon'ny vokatra teo amin'ny lampihazo ary nitombo ny isan'ny mpanjifa tsy faly. Mba hahazoana antoka fa mahazo ny entana tsara indrindra amin'ny Internet ny mpanjifa Amazon, dia manandrana manana mpivarotra kalitao i Amazon. Amazon dia manao izany amin'ny fametrahana politika amin'ireo mpivarotra eo amin'ny lampihazo. Ary, raha tsy lalaovin'izy ireo tsara dia nampiato ny kaontiny izy ireo. Hetsika mahazatra io ary orinasa manampy ny olona mila izany izahay.
Na izany aza, raha vaovao amin'ity lohahevitra ity ianao dia manoro hevitra anao aho hamaky etsy ambany bebe kokoa momba ny fampiatoana fampiatoana Amazon, sy ny fomba hanampiantsika ny olona manana kaonty mpivarotra mihantona.
Inona no dikan'ny fampiatoana ny kaonty Amazon?
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isany, mihamaro hatrany ny tranga fampiatoan'ny mpivarotra Amazon. Raha ny tokony ho izy dia mety misy fepetra telo izay mety tsy maintsy lalovan'ny mpivarotra Amazon. Ireo dia:
fampiatoana: Raha mijanona ny kaontinao dia midika izany fa afaka manao Appeal fampiatoana Amazon ianao. Midika izany fa mila manana drafi-pandaminana ianao.
Nandà: Midika izany fa efa nanao fampiakarana fampiatoana ny Amazon ny mpivarotra saingy nolavin'ny manam-pahefana izany. Amin'ity tranga ity dia mila manana drafitra fanavaozana ny olona iray.
voarara: Io no teboka tsy hiverenana. Tsy misy fampiatoana fampiatoana hahavonjy anao raha voarara ny kaontinao.
Ny fampiatoana Amazon dia azo fintina amin'ny roa voalohany. Raha mijanona ny kaontinao na nolavina ny fampiakarana anao. Midika fotsiny izany fa tian'i Amazon ny hanaovanao fanovana kely sy hanatsara ny serivisinao.
Saingy, raha voarara amin'ny sehatra ianao izay tena faritra maizina dia tsy misy fiverenana. Mety hieritreritra ny hanokatra kaonty vaovao ny olona saingy mifanohitra amin'ny politikan'i Amazon izany. Midika izany fa tsy misy fomba tena famerenana ny kaontinao. Na izany aza, dia amin'ny hetsika maharikoriko indrindra ihany no mitranga. Noho izany, raha tsy fantatrao ity loop ity dia mety hisy ny tsy hahatratraranao izany haavo izany. Ary azo amboarina izany amin'ny alàlan'ny fampiakarana fampiatoana fampiatoana Amazon.
Ny antony mahazatra indrindra amin'ny fampiatoana Amazon
Raha manomboka mamaky ny teny sy ny toetran'ny Amazon isika dia hitaky fotoana sy fisavoritahana be izany. Amazon no sehatra ecommerce lehibe indrindra mangataka ny hanaraka fitsipika sy fitsipika maro be. Izany no antony nahatonga ny isan'ireo fampiatoana fampiatoana an'i Amazon nandritra ny fotoana lasa. Raha ny marina, nahita ny fitomboan'ny isan'ny olona nanantona anay hanao fangatahana fampiatoana Amazon izahay. Raha mandeha amin'ny alàlan'ny bokin'i Amazon isika dia mety misy antony maro. Saingy, izy rehetra dia azo atambatra ho telo:
Ny antony mahazatra indrindra dia ny fanitsakitsahana ny politika angatahin'i Amazoninao harahina. Raha mbola tsy nahetsika ianao dia mety hisy ny fanitsakitsahana ny politika.
Misitrika lalina ny orinasanao. Tsy te hampiala voly ireo mpivarotra manana varotra mahantra i Amazon. Matetika, misy antony marim-pototra mahatonga izany? Ary raha fantatrao izany dia alao antoka fa manamboatra azy ianao.
Fivarotana vokatra tsy azo atao eo amin'ny lampihazo. Mety hitranga amin'ny vokatra manitsakitsaka ny IP Policies koa izany.
Vakio ihany koa: Antony fampiatoana ny kaonty mpivarotra Amazon
Ahoana no ahitantsika ny lohahevitra fampiatoana an'i Amazon?
Raha tsy mihodina etsy sy eroa ny lohantsika, ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia amin'ny fanamarinana ny fampandrenesana nalefan'i Amazon. Raha toa ka nahantona voalohany ny kaontinao dia azo inoana fa mety tsy hiraharaha izany ianao. Saingy, Amazon dia manome toky fa hanondro ny hadisoanao ary eo no ezahantsika hanampy.
Rehefa nandalo ilay fampandrenesana nalefan'i Amazon izahay dia nanomboka ny asanay hamorona kaonty mpivarotra fampiatoana Amazon izay namboarina.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fampiatoana ny kaonty Amazon Seller?
Ny fanoratana fampakarana fampiatoana Amazon dia korontana tsy ilaina rehefa afaka miala amin'ny fampiatoana fotsiny ny olona. Serivisy fampiakarana fampiatoana any Amazon izahay fa manome ny mpanjifanay tombony amin'ny fisorohana ny fampiatoana ihany koa.
Ny fampiatoana ny kaontinao ary averina amin'ny laoniny dia mety ho ara-dalàna. Saingy, inona no mitranga rehefa very ny orinasanao mandritra ny roa andro ianao. Raha ny tena izy, io dia mety hanala sabatra ihany koa ny fahatokisanao sy ny laharan'ny vokatra ao amin'ilay rafitra. Ankoatr'izay dia mihidy ny fivarotanao amin'izao fotoana izao izay midika fa tsy mahazo vola ianao.
Izahay dia mijery tsara ny hetsika ataonao eo amin'ny lampihazo ary mitarika anao amin'izany. Miezaka izahay fa tsy tratry ny asa ratsy rehetra, na amin'ny fahalalana izany na amin'ny tsy fahalalana. Matokia ahy, mpanjifa marobe no mahatsapa fa afaka mikorontana sy manakarama olona toa antsika izy ireo. Saingy, tsy mandeha amin'ny fomba tiantsika foana izany, indrindra fa raha namerina hatrany ireo hadisoana mitovy hatrany ny mpanjifa. Hamarininay fa tsy diso ianao ary mitazona làlana mba haharitra ny fahasalaman'ny kaonty mpivarotra ary hialan'ny mpanjifa ny fampiatoana fampiatoana Amazon.
Ahoana no fomba hamoronana drafi-pandaminana natao ho an'ny fampiatoana an'i Amazon?
Misy zavatra roa mila atao mivantana. Ohatra, jereo ny fampandrenesana nalefan'i Amazon taorian'ny fampiatoana azy. Zahao ny refin'ny mpivarotra raha hijery ny fahombiazan'ny kaontinao tato ho ato.
Mba hanatsarana ny vintana ary hamoronana mety Plan of Action (POA), Miezaka ny ho feno araka izay azo atao izahay. Ary, manandrana mifona ihany koa izahay, teny lakile izay mety ho mahery vaika tokoa.
Efa imbetsaka isika no nanao an'io. Izahay rehefa mahatakatra izay rehetra nomena antsika dia manandrana manamboatra drafitra izay mampiasa ireto singa fototra ireto ho toy ny akora:
Izahay amin'ny anaranao dia tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana rehetra nitranga. Na amin'ny lampihazo io na amin'ny mpanjifa na izy roa.
Miezaha manao sary iray izay ahatsapanay azy ireo fa feno fankasitrahana ny fananana sehatra toa an'i Amazon. Ary, tena fotoana tena tsy tianay ny hikorontana.
Aza mitsikera ny vokatra mpivarotra hafa na ny tolotr'izy ireo. Amazon dia mandany fotoana ara-potoana nefa mampiato ny olona rehetra izay mandika lalàna.
Ary toa ny nilazanay fa "miala tsiny" no teny lakile.
Torohevitra manan-danja hafa
Ireo dia mety toa fandokafana fa matokia ahy fa marina daholo izany amin'ny lafiny mendrika. Amazon dia nanolotra sehatra ho an'ny maro amin'ny varotra marina. Manome fotoana be dia be ho an'ireo maniry ny hanao izay tsara indrindra amin'ny orinasany. Ny fahafaha-mivarotra mivantana amin'ireo mpanjifanao namana na avy aiza na aiza dia zavatra irin'ny olona rehetra. Ary ankehitriny rehefa tena zava-misy izy io fa tsy misaotra, be dia be ny mpivarotra no manandrana mitrandraka azy ho an'ny tanjona fohy.
Raha vantany vao nangoninay ny angon-drakitra rehetra hananganana antso ambony fampiatoana Amazon, dia tsy maika. Ilaina tokoa ny hoe izay rehetra alefa any Amazon dia manana kalitao faran'izay tsara. Mety ho somary mampiahiahy ihany ity fa ny tena izy dia raha tsy mahatratra ny andrana voalohany ianao dia mety handany fotoana be dia be ny famerenana amin'ny laoniny.
Ireo akora ilaina hafa ampiasaintsika hanamboarana ny antso avo amin'ny fampiatoana Amazon:
Tsy manandrana miresaka afa-tsy momba ireo politika sy izay zonay izahay. Tsy misy antony tokony hiresahana momba ny metrika fampisehoana rehefa aato ianao. Na dia manome isa mirehitra aza ianao, tsy midika inona izany, indrindra raha tsy mitovy ny fiahiahy.
Hodinihinay fa tsy voajanahary lava ny taratasy nalefanay. Ny atiny lava dia mitaky fotoana handevonana ary noho izany dia fohy sy malemy no fomba mety indrindra hanoratana ny fampiatoana fampiatoana Amazon.
Raha tokony hampiasa paragrafy fanazavana lava izahay dia manandrana manamboatra ny fampiakarana fampiatoana Amazon amin'ny alàlan'ny isa sy isa bala. Mety ho toa fifampiraharahana kely io fa mahomby ny anao taratasy fampakarana amazona fomba azo zahana kokoa amin'ilay manam-pahaizana Amazon voatendry.
Miezaka ny hisoroka fampahalalana fanampiny izahay ary tsy hifantoka afa-tsy amin'ny olana natolotra ny mpanjifa. Tsy mitarika fiheverana tsy ilaina any an-kafa izany.
Ny fiantombohan'ny asa dia ny olana efa akaiky. Raha tokony hilalao kilema misy tsiny amin'olona izahay dia alao antoka fa fantatr'i Amazon fa mahatakatra ny fandikan-dalàna izahay ary hanamboatra azy io ASAP, ary tsy hamerina azy intsony intsony.
Torohevitra lehibe iray hafa, izay matetika ampiasaintsika dia ny manoratra fehintsoratra fampidirana manazava ny zava-drehetra amin'ny fotony. Mety tsy dia mifanaraka loatra izany fa toa majia. Torohevitra tena ilaina ireto raha manao antso amin'ny fampiatoana ny Amazon. Ary, amin'ny ankapobeny dia ny endrika lalaovintsika ao anatiny fa zava-dehibe ny manamarika fa ny olana eo an-tànana ihany no hamaritra ny fomba hitondrana azy.
Fa maninona izahay no manome sosokevitra ireo mpivarotra mba handeha ho matihanina amin'ny antso amin'ny fampiatoana?
Mety hafahafa kely izany, saingy ny fihetsem-po dia mety ho antony lehibe iray mahatonga ny famerenanao indray. Mihaona amin'ny mpanjifa isan'andro izahay izay niasa tamim-pahatsorana tamin'ny sehatra. Na izany aza, naato ny kaontiny satria tsy nahalala izy ireo na tsy dia nahetsika loatra tamin'ity departemanta ity.
Raha ny marina dia afaka milaza aminao izahay momba ny mpanjifa izay nanalavitra tsotra izao ny fampandrenesan'i Amazon satria hijanona tsy hivarotra ny iray amin'ireo vokatra vokariny izy ireo noho ny hevitry ny mpampiasa. Na dia talohan'izay azon'izy ireo natao atao aza dia nampiato ny kaontiny i Amazon.
Betsaka ny olona eo amin'ny lampihazo izay nanome fotoana betsaka hananganana ny orinasany. Ny fahazoana azy rehetra alaina vetivety dia mety ho maro. Ary, zava-dehibe ny mitazona ny tenanao ho noforonina. Ary, ankoatry ny maha ekipa valin-teninao voalohany anao aorian'ny fampiatoana anao dia ataonay antoka fa tsy hiantona amin'ny voalohany ianao. Izahay @ APlus Global Ecommerce dia mino fa mpiara-miasa amin'ny mpanjifanay amin'ny fotoana ilàna izany. Ny fandrosoan'izy ireo miroborobo dia ny fahombiazantsika.
Ny toro-hevitra faratampinay hialana amin'ny fanoratana fampiatoana Amazon
Ie, serivisy izahay ary tianay ny mahazo orinasa. Saingy, tsy midika izany fa tsy tokony hiezaka ny hanampy ireo mpivarotra Amazon namantsika isika. Mety manana varotra samihafa izahay fa azonay tsara ny olanao. Ary na dia betsaka aza ny serivisy any dia mieritreritra ny hanome tifitra ara-drariny ny tsirairay amin'ny fiezahana hanao antso avo ho an'ny tenany. Betsaka ny zavatra azo lazaina nefa tsara kokoa hatrany ny misoroka ny fampiatoana. Mba hanaovana izany dia misy zavatra roa mila tadidinao.
Aza mivarotra karazana zavatra ferana.
Betsaka ny mpivarotra mety manao an'izany nefa tsy midika izany fa tokony hanao izany ianao. Amazon dia mampianatra manokana ny mpivarotra azy hanoherana izany. Noho izany, zava-dehibe ny fihainoanao tsara raha te hisoroka ny fampiatoana fampiatoana Amazon ianao.
Miezaha hisoroka ny fivarotana
vokatra izay toa mampiahiahy anao. Raha toa ny fakana amidy ny vokatra amidinao ka maka tahaka ny fitaovana sasany na ny fiasany, dia miezaha fotsiny hahafantatra ny fototr'io vokatra io. Betsaka ny olona mampiato ny kaontiny noho ny politika fanitsakitsahana IP. Ity no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny mpivarotra maro hampiato ny kaontiny.
Mifandraisa amin'ny mpisolovava.
Mazava ho azy ny fitantanana orinasa dia midika fa mety mivarotra vokatra mihoatra ny iray ianao. Midika fotsiny izany fa raha mahatsapa zavatra hafahafa amin'ny vokatra amidinao ianao ary maniry hanao izany dia ny fahazoana consultation no zavatra tsara indrindra azonao atao.
Aza hadino ny hevitrao.
Ny fanamarihana ao amin'ny Amazon no famantarana lehibe amin'ny kalitaon'ny vokatrao. Tsy tian'ny Amazon ianao hanandrana hanova azy ireo amin'ny fomba rehetra. Zava-dehibe ny fandraisanao ireo hevitra ireo amin'ny fomba manorina ary manomboka manatsara ny serivisinao amin'ny alàlan'ny fanarahana azy ireo fotsiny. Ny fanadihadian'ny mpanjifa no toerana voalohany ahafahan'ny olona mitady fitsikerana sy fiderana marina. Ary raha tsy mahavita izany ianao dia mety handray ny fampiatoana fampiatoana Amazon.
Aza mivadika amin'ny famaritanao.
Mpivarotra marobe no mamaritra ny vokatr'izy ireo amin'ny fomba hafa raha ny tena vokatra kosa tsy hatreto. Raha mahazo fitarainana be loatra momba izany i Amazon dia mety handray tsara an Fitsarana fampiatoana an'i Amazon.
Ny fahazoana fampiakarana fampiatoana any Amazon no mety ho fitsapana mahatsiravina indrindra mahazo anao. Na dia, raha tsy mahay mitantana ny toe-javatra aza ianao dia azonao atao ny mangataka anay hanohana anao. Raha ny taona dia mbola vao teraka isika fa raha ny zavatra niainana dia manana ny sasany amin'ireo manam-pahaizana momba ny fampiatoana ny fampiatoana Amazon indrindra. Ny mpiasanay dia manana traikefa lalina amin'ny akany ary manana traikefa an-taonany eo amin'ny sehatra. Ankoatr'izay Aplus Global Ecommerce manolotra hafa tolotra toy ny fisorohana ny fampiatoana, fanaraha-maso ny fahasalamana amin'ny kaonty, fanamafisana ny varotra sns. Noho izany, raha mitady serivisy matihanina hanohanana anao ianao dia mety hanampy anay. Manantena izahay fa mety nanampy anao izany. Ary koa, misaotra anao namaky azy hatramin'ny farany.